Vaky fisarahana Divas 5 tanteraka izay nilalao tamin'ny fahitalavitra - Wwe
Vaky fisarahana Divas 5 tanteraka izay nilalao tamin'ny fahitalavitra
Ny andiana zava-misy Total Divas dia manome topy maso ireo mpankafy WWE ny fomba fiainan'ny vehivavy Superstars an'ny orinasa ny fiainany lavitry ny fijerin'ny WWE.
Tany am-boalohany, Total Divas dia nanana mpikambana mpilalao fito raha vao nanomboka ny seho tamin'ny 2013 (Brie Bella, Cameron, Eva Marie, JoJo Offerman, Naomi, Natalya ary Nikki Bella), ary vehivavy 13 hafa avy amin'ny WWE no niditra ho mpikambana ao anatin'io andiana mpilalao io nanomboka teo.
Fizarana Total Divas maro no mihodina manodidina tantara an-tsehatra any ambadiky ny Superstars , fa ny seho koa dia manadihady ireo fifandraisana tena misy amin'ny vehivavy WWE.
Ny fanambadian'i Brie Bella sy Daniel Bryan dia nisongadina be tamin'ny Total Divas talohan'ny nahazoan'ny The Bellas ny tantaram-piainan'izy ireo Total Bellas tamin'ny 2016, raha i Naomi kosa dia niseho niaraka tamin'ny vadiny - ny WWE Superstar Jimmy Uso namany - saika isaky ny vanim-potoana Total Divas.
Mampalahelo fa isaky ny fanambadiana sambatra izay naseho tao amin'ny Total Divas, E! fakantsary ihany koa ny fakana fotoana izay nisarahan'ny mpikambana ao amin'ny fizarana vehivavy an'ny WWE miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, andeha hojerentsika ny fisarahana fisarahana totalin'ny Total Divas dimy izay nilalao tamin'ny fahitalavitra.
Ny fisarahan'i # Paige # 5 miaraka amin'i Bradley nasongadiny tamin'ny Total Divas
Fizarana marobe amin'ny vanim-potoana fahatelo an'ny Total Divas mifantoka amin'ny fifandraisan'i Paige amin'ilay mpihira mpitarika ny tarika rock Emarosa, Bradley Walden.
Ny iray amin'ireo sehatra Total Divas tsy hay hadinoina indrindra nahatafiditra an'i Paige sy Bradley dia tonga tamin'ny 8 martsa 2015 rehefa nizara fiara tamin'ny reniny sy ny rahavavin'ny sakaizany vaovao ilay Tompondaka Divas indroa.
Taorian'ny nandefasan'i Paige tamim-pahatsorana horonantsary tany amin'ny renin'i Bradley nilaza fa hanambady izy ireo, dia nanambara ny rahavavin'i Bradley fa ny anadahiny dia efa nanambady indray mandeha. Paige, izay tsy nahalala ny fanambadian'ny olon-tiany taloha, dia nilaza fa mikorontana izy saingy tsy te hiteraka korontana eo imason'ny fianakaviany izy.
Raha vantany vao tonga tao an-tranon'i Bradley izy ireo, dia nifamaly mafy tamin'ny sakaizany i Paige, izay nilaza fa tsy te hiaraka aminy izy.
Tamin'ny fanombohan'ny vanim-potoana manaraka dia nilaza tamin'ny mpiray tsikombakomba aminy Total Divas namany i Paige fa Nandefa hafatra ho azy i Bradley hampahafantatra azy fa tsy mila fifandraisana izy.
Nisaraka tamiko tamin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra izy. Zaza kely goavambe sy lehibe izy amin'ny ankapobeny. Nifandray tamina fifandraisana aho tamin'ny farany rehefa tsy te ho iray. Izy, toa tsy nahatsapa fifandraisana mihitsy. Fa maninona ianao no nilaza hoe ‘tiako ianao’, avy eo?
Nihomehy i Paige taorian'ny nilazany an'io fanehoan-kevitra io fa ny lehilahy rehetra dia ** ary tokony hanangan-tanana izy ireo ary hikapoka ny tarehiny.
john cena ianao tsy afaka mahita ahy meme
Fihetseham-po fiaraha-miory amin'ireo mpifoka rongony: Ny ady hevitra hanoherana sy fanoherana
Zava-misy momba ny psikolojia mahatalanjona 15 Tokony ho Fantatry ny rehetra
5 Adino WWE Toe-tsaina Era Superstars ary aiza izy ireo izao?
Seth Rollins dia nanambara tantara mahaliana ao ambadiky ny fijeriny 'fonon-tànana iray'
Iza moa i Josh Bowman? Ny momba ny vadin'i Emily VanCamp rehetra rehefa mandray ny zanany voalohany izy
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fahasarotana ara-batana amin'ny fifandraisana? 7 zavatra tokony hodinihina.
Jery ​​jery todika amin'ny fanjakan'ny Lohateny Triple H
Maninona izao tontolo izao no mila mpiasa maivana kokoa noho ny hatramin'izay
Fomba 7 hahaliana ny olona rehefa tsy tonga voajanahary
ahoana no hahalalanao raha efa vonona amin'ny fifandraisana ianao
inona no hatao rehefa mankaleo irery ao an-trano
Nahoana aho no mankahala masony
inona no dikan'ny hoe mafy loha amin'ny fiarahana